Ny minisitry ny fizahantany teo aloha Dr. Walter Mzembi dia tsy meloka tamin'ny fikarohana haza lambo nataon'ny UNWTO General Assembly tany Zimbabwe
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Ny minisitry ny fizahantany teo aloha Dr. Walter Mzembi dia tsy meloka tamin'ny fikarohana haza lambo nataon'ny UNWTO General Assembly tany Zimbabwe
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany • Zimbabwe Breaking News
Dr. Walter Mzembi dia iray amin'ireo minisitry ny fizahantany naharitra indrindra eran'izao tontolo izao. Izy koa dia minisitry ny raharaham-bahiny tany Zimbabwe. Voampanga ho nanao kolikoly izy noho ny fiampangana lainga mifandraika amin'ny UNWTO General Assembly ao Zimbabwe - Zambia. Voadio amin'ny asa ratsy rehetra izy izao.
Noterena hatao sesitany nandritra ny 3 taona, ny minisitry ny fizahantany teo aloha Dr. Walter Mzembi avy any Zimbabwe dia voadio tamin'ny fiampangana azy rehetra tao amin'ny Fitsarana Avo Zimbabwe.
Andro tsara ho an'ny fahamarinana izao ary manala sarona ihany koa ny fizotry ny fifidianana mampiahiahy ao amin'ny World Tourism Organization (UNWTO), izay nametraka an'i Zurab Pololikashvili teo amin'ny fahefana.
Mzembi dia fitaovana lehibe tao ambadiky ny sehatra COVID-19 ankehitriny. Ny fanadiovana ny anarany dia mety hanome an'i Dr. Mzembi fotoana hanampiana ny traikefany amin'ny hoavin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany na angamba any amin'ny firenena malalany, Zimbabwe.
Dr. Mzembi dia ekena sy ankafizin'ny namany foana manerantany. Nahita nitety an'izao tontolo izao izy ary niresaka tamina hetsika lehibe maro nandritra ny fotoana naha minisitra azy.
Raha jeren'ny mason'ny besinimaro dia nilaza taminy ny namany fa mety ho fotoana iray izy no minisitry ny fizahantany tsara indrindra eran'izao tontolo izao saingy indrisy fa avy amin'ny firenena "diso" izy.
Dr. Mzembi dia lehilahy manerantany. Izy no faharoa amin'ny maha kandidà ho sekretera jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany amin'ny taona 2017. Niady ho an'ity toerana ity izy ary nanome azy hatrany hatrany - tamin'ny farany dia namela ny fahafahany.
Fantany ny fanodinkodinan'ny sekretera jeneraly ankehitriny Zurab Pololikashvili handresy amin'ny fifidianana. Manohitra ny mety rehetra, nandresy tamin'ny fifidianana UNWTO tamin'ny toerana faharoa i Mzembi. Niady hatramin'ny farany i Mzembi ary niantso ny hetsika Zurab tamin'ny tena anarany - hosoka.
Nilefitra tamin'i Zurab tao amin'ny General Assembly tao Chengdu, China izy, ary nampanantena fa raha miala ny fanoherany azy dia hotendrena hiandraikitra komity voatendry hanova ny rafitry ny fifidianana ao amin'ny UNWTO ianao. Tsy nisy izany, satria ny governemantan'i Mzembi dia nalain'ny tafika.
Raha tokony handray fodiana an-tanindrazana i Mzembi dia voampanga ho nanao asa ratsy mifandraika amin'ny andraikiny amin'ny maha-mpampiantrano ny UNWTO General Assembly amin'ny 2013 any Zambia sy Zimbabwe.
Ahoana no nitrangan'izany, ary ahoana no mety hifandraisany amin'ny fifidianana UNWTO 2017 raha nifaninana tamin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO i Mzembi dia tsy navoaka mazava ampahibemaso ary feno tsaho.
Ny 57 taona, izay mipetraka any Afrika Atsimo ankehitriny, dia voasambotra taorian'ny nanesorana ny filoha Robert Robert Mugabe tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny Novambra 2017.
4 taona taorian'ny nanonganana ny governemantan'i Mzembi dia nesorin'ny Fitsarana Avo izy tany Zimbabwe tamin'ny farany izay nanondro ny tanan'ny minisitry ny fizahantany teo aloha Walter Mzembi fa "fotsy tahaka ny oram-panala." Voadio tamin'ny fiampangana azy momba ny kolikoly rehetra izy.
Nampangain'ny mpampanoa lalàna izy sy ny efatra hafa, anisan'izany ny sekretera mpizahatany tamin'izany Magret Mukahanana Sangarwe noho ny fiovam-pony hampiasa ny fiara efatra an'ny Ford Ranger novidina hampiasaina amin'ny drafitra sy nandritra ny fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny fizahan-tany nataon'ny Firenena Mikambana izay natolotry Zimbabwe tamin'ny 2013.
Taorian'izay, ny mpampanoa lalàna Jeneraly Kumbirai Hodzi dia nametraka fangatahana tao amin'ny Fitsarana Avo mangataka ny famoahana ireo fiara izay nolazainy fa tokony natolotra ny minisiteran'ny fizahantany tamin'ny faran'ny fihaonamben'ny UNWTO.
Saingy ny mpitsara David Mangota avy amin'ny Fitsarana Avo Harare, tamin'ny fanapahan-kevitra natao tamin'ity herinandro ity, dia nanapa-kevitra fa ny mpampanoa lalàna dia tsy liana amin'ny fiara izay "tsy fananan'ny governemanta velively" ary raha ny marina dia fananan'ny fitokisana izay manana mandat mba hijanona eo hatramin'ny ela taorian'ny nandalovan'ny hetsika UNWTO.
Nanapa-kevitra ny mpitsara: "Ny fanambaran'ny mpampanoa lalàna izay manitsakitsaka ny fomba fiasan'ny governemanta ireo izay tsy nahavita nanolotra ireo fiara nitondra môtô tany amin'ny minisiteran'ny fizahantany sy ny indostrian'ny fandraisam-bahiny taorian'ny fihaonambe dia sarotra ny mahatakatra, avelao ihany…
“Tsy mitanisa ny boribory, ny fitsipika, ny lalàna na ny lalàna izy izay manantitrantitra ny tokony hanarahan'ny olona voavaly. Tsy mamoaka porofo manohana ny fanambarana izy fa tokony ho natolotry ny olona ho any amin'ny governemanta ireo fiara mpitondra môtô taorian'ny hetsika. "
Nilaza i Mangota fa miharihary avy amin'ny taratasim-pitokisana fa mazava ny governemanta te-hanasaraka ny fanomezana ho an'ny fitokisana amin'ny minisiteran'ny fizahantany. Ny fitokisana - izay nanana mpiambina valo - dia handray sy handoa vola ho fanomanana ny fihaonambe dia mijanona eo amin'ny toerany aorian'ny fihaonambe ary mitazona ny ambin'izay fanomezana nangoniny ho an'ny kaonferansa ho fitahirizam-bolan'ny fitokisana noho ny asa ho avy izay mifandraika amin'ny fizahan-tany sy fandraisana olona, ​​hoy ny mpitsara.
“Raha ny tena izy dia tsy fikasana ny hamongotra ny fitokisana intsony amin'ny faran'ny kaonferansa. Tsy fikasana koa ny hanana izay fanomezana voarainy ho fanomanana ny fihaonambe hatolotra ny governemanta aorian'ny hetsika. Raha ny marina dia toa fikasan'ny mpampanoa lalàna ny hanala ny fitokisan'ny fiarany amin'ny motera, "hoy ny mpitsara.
Nilaza i Mangota fa “sarotra ny mamela azy, apetraho fotsiny” ny fanapahan-kevitr'i Hodzi “tsy nampoizina” hanondro an'i Mzembi sy ireo hafa izay mpahazo tombony amin'ny fitokisana ho “mpangalatra” rehefa “tsy afaka nanaporofo ny fitondran-tenany voalaza fa tsy mahasoa izy ireo.”
Nanampy i Mangota: “Mazava ho azy fa tsy nangalatra fananan'iza na iza ireo namaly. Ny fampiasan'izy ireo ny fiara aorian'ny kaonferansa dia tsy hita na aiza na aiza akaikin'ny heloka bevava amin'ny halatra na halatra fananana fitokisana. Navelan'izy ireo hisoratra anarana amin'ny anaran'ny fitokisana izay tompony ireo fiara moto. Tsy mifanaraka amin'ny an'ny mpangalatra ny fihetsik'izy ireo. Tsy misy velively ny singa halatra…
“Raha ny fandinihana ny zava-misy momba ity fampiharana ity, noho izany, tsy misy na iray aza amin'ireo mpandray andraikitra azo lazaina ho nanao heloka bevava. Ny fitondran-tenan'izy ireo tsirairay avy dia ambony noho ny takelaka. Tsy misy singa misy fanafintohinana mihatra amin'izy ireo. Ny tànany mitoetra ho fotsy tahaka ny oram-panala. Madio izy ireo. Ny fangatahana dia vokatr'izany dia noroahina miaraka amin'ny vidiny. ”
Talohan'ny nanenjehany ny asa fisintahana dia nametraka fiampangana heloka bevava an-dry Mzembi, Sangarwe, Sussana Makome Kuhudzayi, Aaron Dzingira Mushoriwa ary Gray Hama ny mpampanoa lalàna. Raha ny fahitan'i Justice Mangota dia “tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny nisintona toy ny fahendreny izy.”